Global Voices teny Malagasy » Mpanoratra nasongadina: Diego Casaes · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Septambra 2018 14:17 GMT 1	 · Mpanoratra David Sasaki Nandika Naomy
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka
Tamin'ny herinandro teo aho tao amin'ny Dinika Kolontsaina Nomerika Breziliana [pt]  nanambintana nihaona tamin'i Diego Casaes, mpanoratra nanolo-tena tato amin'ny Global Voices sady mpandika teny avy ao Salvador, Brezila. Ny ankamaroan'ny soratr'i Diego tato amin'ny Global Voices dia nampielezana fanairana momba ny fandrahonana ara-panaovandalàna sy fahafahana an-tserasera Brezila, toy ilay “Volavolan-dalàna Azeredo “. Namoaka mombamomba ny mpikatroka an-tserasera toa an'i João Carlos Caribé  sy i Daniel Pádua (izay vao namoy ny ainy noho ny homamiadana)  sy ny fiezahan-dry zareo hiaro ny fahafahan'ny tsirairay mbamin'ny fampifandraisana ara-piarahamonina amin'ny alalan'ny aterineto koa izy.
HItodi-doha tsy ho ela any Copenhagen i Diego hanao tatitra momba ny Kaoferansan'ny Firenena Mikambana momba Fikorontanan'ny Toetrandro  tontosaina manomboka ny 7 ka hatramin'ny 18 desambra. Nasaina hanao tatitra izy tamin'ny nahazoany lokan'ny fifaninanana famahanam-bilaogy Eritrereto Izany (Think About It), izay ahafahanao mamaky ny lahatsorany rehetra mifandraika amin'ny fikorontanan'ny toetrandro ao Brezila ato .
Diego Casaes: Nanomboka aho raha tafahoana tamin'i Paula Goes  (mpanoratra ato amin'ny Global Voices sady mpandika teny portiogey) tao amin'ny Twitter. Nanasa ahy izy hanoratra. Momba ny tondra-drano tao Brezila tamin'izany fotoana izany. Ary tamin'ny volana May 2009, tamin'ity taona ity. Izany hoe vao fito volana izay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/06/125344/
 Dinika Kolontsaina Nomerika Breziliana [pt]: http://culturadigital.br/blog/2009/11/18/relatorios-das-curadorias-dos-eixos-do-forum-contribua-nas-plenarias/
 Volavolan-dalàna Azeredo: https://globalvoicesonline.org/2006/11/11/holding-the-line-for-internet-freedoms-in-brazilian-cyberspace/
 Daniel Pádua (izay vao namoy ny ainy noho ny homamiadana): https://globalvoicesonline.org/2009/11/20/brazil-the-loss-of-a-pioneer-digital-activist/
 Kaoferansan'ny Firenena Mikambana momba Fikorontanan'ny Toetrandro: http://en.cop15.dk/
 lahatsorany rehetra mifandraika amin'ny fikorontanan'ny toetrandro ao Brezila ato: http://climatechange.thinkaboutit.eu/think2/blogger/silva